Dharka roobka → Dharka shaqada • Shaashadda kumbuyuutarka ee P&M
Dharka roobkain aan kuugu soo bandhigno kuweenna dukaan waxaa laga sameeyay waxyaabo tayo sare leh oo la aqoonsan yahay oo buuxiya xeerar iyo heerar adag. Waa mid ka mid ah noocyada dharka ee aadka loo jecel yahay xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, oo ku xigta dhogorta diiran iyo dhididka raaxo leh.
Dharka roobka la xaqiijiyay
Dharka roobka ayaa loo qaybiyay dhowr qaybood si loo fududeeyo raadinta. Nooca aan bixinno waxaa loo isticmaali karaa warshado badan. Xulasho ballaaran iyo qiimayaal tartan ayaa hubaal kuu oggolaan doona inaad hesho alaabada saxda ah.
Eeg sidoo kale: Xirashada kombiyuutarka - waa maxay?
Noocyo badan oo noocyo ah xilli kasta iyo warshad kasta
Dharka roobka ayaa u adkeysanaya biyaha iyadoo ay ugu wacan tahay lakabyo gaar ah oo gudaha ah oo loogu talagalay inay ku ilaaliyaan isticmaalaha raaxo iyo raaxo leh.
Waxaan bixinaa: xirmo, jaakado, jaakado, surwaal, ponchos. Kuwa ugu caansan waa noocyada fududeeya xulashada iyaga oo sii deynaya baahida loo qabo in la doorto shakhsiyaadka shakhsiga ah. Waxaan bixinnaa cabbirro kala duwan, iyo sidoo kale dhar cabbir caalami ah.
Dajisaa ka samaysan waxyaabo jilicsan. Noocyadu waxay ka kooban yihiin, kuwo kale ka soo duugga iyo jaakadaha. Waxay bixiyaan difaac buuxa oo ka dhan ah qoyaanka - waxaa lagu hayaa lakabyada kore, iyo waxyaabo dheeri ah sida jeebadaha la gashado ayaa ka caawiya ka ilaalinta waxyaabaha qarsoon qoyan. Xirmooyinka roobka ayaa u oggolaanaya socodka bilaashka ah ee hawada, taas oo loo baahan yahay si loo yareeyo khatarta dhidid badan.
Jaakadaha koodhadhka roobku waxay bixiyaan difaac kaamil ah oo ku saabsan helitaanka qoyan iyadoo ay ugu wacan tahay adeegsiga agab heer sare ah. Adeegsiga qalabkan waxaa loo tarjumayaa adkeysi aan caadi ahayn iyo iska caabin sare oo waxyeello ah. Bixinta waxaa ku jira moodello badan - laga bilaabo khafiif yar oo loo yaqaan 'zlotys' illaa qaali ah oo ka xoog badan leh cabbitaanno, u adkaysiga cilladda.
Jaakadaha Koodhadhka roobku waa waax leh noocyo kala duwan oo wax soo saar ah oo ka yimaada soosaarayaasha ugu fiican ee loogu talagalay dadkaas xoogga saaraya adkeysiga iyo adeegsiga degdegga ah. Jaakadaha waxay la kulmaan heerar fara badan, moodooyinka qaar waxaa lagu qalabeeyaa waxyaabo milicsiga oo hagaajiya muuqaalka iyo amniga. Gaar ahaan xusid mudan waa moodello dabacsan oo bixiya raaxo buuxda xaaladaha xaaladaha jimicsiga gaarka ah.
Ka ilaalinta arrimaha dibadda
Dharka roobka shaqeeya, oo aad ka heli doonto bakhaarkayaga, wuxuu siiyaa difaac weyn roobka ama dabaysha. Faa'iidadeeda weyn ayaa ah raaxada isticmaalka, taas oo aan xadidayn xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Cabbirka ku habboon wuxuu u oggolaanayaa dhaqdhaqaaqyo aan dhib lahayn inta lagu jiro shaqada ama howlaha kale. Sidoo kale waxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho adkeysiga ugu wanaagsan iyo iska caabbinta waxyeellada. Soo saarista dharka shirkadaha ku takhasusay hirgelinta shuruudaha takhasuska leh ee shaqada ayaa xaqiijinaya socodka hawada ee saxda ah, sidaas awgeedna waxay yareynaysaa halista dhididka. Thanks to guryahaas, soo noqnoqoshada iibsashada dharka cusub ayaa la yareeyay.
dharka roobka eerodharka castoramadharka roobka decathlondharka mootadadharka aan roobka ilaalin karindharka mootadadharka ugaarsiga roobkadharka roobka ilaaliyadharka beerta aan roobka lahayndharka roobkaroobab allegrodharka haweenka ee roobkadharka roobka decathlondharka roobka ee carruurtadharka roobka ee wadayaasha mootooyinkadharka roobka ee carruurtadharka roobka caagga ahdharka fardaha roobkadharka Koszalindharka roobka Krakowdharka mootadadharka mootadadharka roobka loogu talagalay mootooyinkadharka baaskiilkadharka kalluunkadharka rookaha ee mootadadharka roobkadharka roobka shaqeeyadharka dharka roobkadharka shaqada haweenkadharka roobka dibeddakalluumeysiga dharka roobkadharka ciidankadharka roobka PCVdharka shaqada jaakada roobkadharka shaqeeya koodh roobdharka shaqada ee roobka diidodharka isboortiga ee roobkadharka kalluumeysiga ee roobka ka da 'dharka ciidankadharka roobkadharka mootadadharka shaqada ee roobka diidodharka roobka shaqeeya